डा. गोबिन्द केसीज्यू ! एउटा रोगीको रोग सग सरकार किन १३ प्रतिशत भ्याट असुल्छ ? के यहाँ मृत्यु पनि फ्री छैन? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
डा. गोबिन्द केसीज्यू ! एउटा रोगीको रोग सग सरकार किन १३ प्रतिशत भ्याट असुल्छ ? के यहाँ मृत्यु पनि फ्री छैन?
प्रकाशित: २०७४ फागुन १२ गते ४:३९
तथापि तपाईंको पनि गल्ती भेट्टाइयो आज । तर सजायको भागिदार हुन तयार छु भन्नुले तपाईंको हिर्दयको पवित्रता झल्किएको छ । नेपालमा ४५ साल भन्दा अगाडि बनेका नागरिकतामा हजारौं हजार त्रुटि छन त्यस्को सिकार म पनि हु ।
मेरो जन्मपत्रीका देखि मास्टर डिग्री सम्म एउटा मात्रै जन्म मिति छ तर नागरिकतामा तात्कालिक जिल्ला प्रशासन कार्यलयको लापरबाहीले गल्ती भएको छ। मैले चै मेरो जन्म मिति पटकपटक प्रधान न्यायाधीसज्यूले जस्तो सच्याउन सकिन र आवश्यक पनि देखिन किनकि म एउटा गरीबको छोराको त्यति ठुलो हैसियत पनि थिएन भविष्यमा ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने सपना पनि थिएन । नेपालमा ठुलो मान्छे हुनेहरूको हर्कत सब देखिसकियो।
ठुलो मान्छे बन्नका लागि कति साना मान्छेहरुको सपना माथी आगो लगाउनुपर्छ भन्ने कुराको प्रमाण नेपालको इतिहास साक्षीका रूपमा रहेको छ। कतिका सपना र खुसी चोरेर आफ्नो खुसीको जग निर्माण गर्छन र गरिरहेका छन अहिले ” ठुलो मान्छे भएका ब्यक्तिहरुले । बि. पि ले त्यसै भनेका होइनरहेछन कि ठुलो मान्छे त जो पनि बन्न सक्छन तर असल मान्छे बन्न गाह्रो छ ” त्यसैले यो बिषयमा कुनै दिन ठुलो बहस हुन सक्ला बरु ।
म केही दिन तिमी काम गर्ने चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान महाराजगन्ज चक्कर काटिरहेको थिए । तिमी झिसमिसे बिहानीमा उठेर हरेक भवनका प्राङ्गणमा कुदिरहेको देख्थे ।एक्लै देख्थे तिमीलाइ । तिम्रा अघिपछि कोहि थिएनन । तर यस्तो लाग्थ्यो भैमा शीतले भिजिरहेका फूलहरु सग तिमीले बोलिरहे जस्तो । म परै बाट तिम्रो अनुहार जिउ आँखा हातगोडा हिडाइ हेरिरहेको हुन्थे । यस्तो लाग्थ्यो कि एउटा किसान आफ्नो खेतका आलिमा बडाे स्नेहपुर्व हिडिरहेको छ ।
तिमी एक्लै हिडिरहनु आकाशमा एक्लै जुन हिडिरहे जस्तो लाग्यो । यहाँ ठुलो मान्छेहरु हिडदा दुई तिर दुई भुसतिघ्रे गार्ड अनि केही काम नभएका कार्यकर्ता र एल्सिन कुकुरहरू अघिपछि लाग्छ्न अनि मात्रै ती ठुला मान्छेहरुले आफुलाइ सुरक्षीत महसुस गर्छन। तिमी एक्लो हिडिरहेका देख्दा नीलो नीर्मल आकाशमा एउटा चम्किलो तारा हिडिरहे जस्तो लाग्यो ।
एउटा साहित्यकार भनु वा एउटा लेखकको अनुभुतिलाई छुने गरि तिम्रो निजि जिन्दगीको दिनचर्याले अलिकति छोयो मलाई पनि र केही लेख्ने सहास गरे तिम्रो बारेमा ।
तिमीलाई बोलाउ जस्तोत लागेको थ्यो तर बोलाइन । एउटा पातलो दुरी सगै हामी धेरै चोटि वारपार भयौ । नेपालको थोरै असल मान्छे मध्य तिमी एउटा असल मान्छे । तिम्रो निजि केहि छैन । यो उमेर सम्म बिहे गरेका छैनौ । आ…..बिहे पनि किन गर्नुपर्यो र ! बिहे गरेर धेरै पछुतो भोगिरहेका दुखीहरुको आखामा तिमी त एउटा इन्द्रेणी थियौ। सुखी इन्द्रेणी । शायद एक्लो रमाउन सक्नेहरुले होला अरुको सपना र खुसीको बारेमा सोच्न सक्छन ।
छोराछोरी घर्बार श्रीमती आफ्न्त नाता कुटुम्बको बिल्ला भिर्नेहरु नै देखिएका छन ज्यादै भ्रष्टाचारी। एक्लो चादनी सधैं चोखो सधैं सितल सधैं पवित्र कसैले नछोइने । वास्तवमा भ्रष्टाचारको मुल जरो भ्रष्टाचारीको परिवार सम्म गाडीएको हुन्छ । किनभने नेपालका अधिकाम्श नेताका श्रीमतीहरु लोभी देखिएका छन ।पतीलाइ भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने कला पत्नीहरुमा हुन्छ र पत्नीको सपनाहरू पुरा गर्न छोराछोरीको माग पूरा गर्न एउटा पति पतीत हुन्छ वा एउटा बाबु भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुन्छ ।
कम से कम तिमी त्यो बाट जोगिएका छौ । एक्लै थिए सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई र कहिले सुनियन तिनको बदनाम । यो दुनियाँ यदि हाक्नु छ भने एक्लो हुनु जरुरी छ । स्वार्थको नातामा नअलमलिनु भनेको शारीरिक र मानसिक स्वतन्त्रता हो । बुद्ध एक्लो थिए र त पृथ्वीमा शान्तिको उज्यालो बोकि ल्याउन सके ।
तिम्रो जन्म मिति महत्त्वपूर्ण थिएन । कसैको पनि जन्म मिति महत्त्वपूर्ण होइन । बिदेशी केक काटेर मैन बत्ती फुकि ह्यप्पी बर्थ डे मनाउने बिदेशी गुलामहरुलाइ महत्व होला जन्ममिति तर तिमीलाई के महत्त्व ! त्यसैले म सुझाव दिन्छु कसैको जन्म मितिको पछि लाग्नु बेकार हो । कसैले गरेको अन्याय र ज्यादती विरुद्ध लाग्ने साहस अझै सम्बृद्ध होस तिमीमा डाक्टर के सी ।
आजको मेरो बिषय नागरिकताको जन्ममिती मात्रै होइन । आजको बिषय हो ” भ्याटको नाउँमा भ्यान्टिलेटरमा बसेको बिमारीले तिरेको १३ प्रतिशत सरकारी कर को बिषयमा हो ।
केसिज्यू तपाईंको लडाइँ यदि अन्यायको विरुद्ध नै थियो भने भ्यान्टिलेटरमा मृत्यु सग सङर्श गरिरहेका तमाम रोगीले खर्च गरिरहेका उपचार खर्च बाट नेपाल सरकारले किन भ्याट असुल गरिरहेको छ?
भ्याट कमाउनेले तिर्ने होकि खर्च गर्नेले तिर्ने हो? यति कुराको जवाफ दिनु भो भने म आभारि हुनेछु ।
मैले तालिका सहित दिएको छु कि एकरात भ्यान्टिलेटरमा सुतेर आयु थपेको बिमारी बाट सरकारले कति भ्याट लिइरहेको छ भनेर ।
नेपालमा चौधरी ग्रुप देखि खेतान समूह सम्म दुगड देखि एन सेल प्रकरण हुँदै सुमार्गी समूहले कति भ्याट छलेका छन के त्यस्को लेखा फेरिहस्ते छ नेपाल सरकार सग?
आज कर प्रकरणमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेर शर्मा एन्ड कम्पनीहरुलाइ जोगाउन सब लागेका छन, तपाईंले त्यस्को बिरोध पनि गर्न सक्नुपर्थ्यो । दुई शयको इन्जेक्सन तर बिमारीको शारिरमा इन्जेक्ट गरेबापतको पारिश्रमिक मात्रै निजि अस्पतालका डाक्टरलाई रु एघार सय तीस रुपैयाँ म आफैले तिरेको छु । र सबै प्रमाण सुरक्षीत राखेको छु ।
पैसा हुनेले मात्रै बाच्न पाँउने हो नेपालमा ? ठुलो नेतालाई पातलो दिसा लाग्यो भने पचासौ लाख तत्काल खर्च गर्न सरकारी ढुकुटी बाट दोहन गरिन्छ । आखिर त्यो पैसा भ्यान्टिलेटरको अचेत बिमारीले तिरेको कर पो रहेछ । सरकार कति अपराधी रहेछ केसीज्यू तपाईंले हाल सम्म खेल्नुभएको सरकार विरुद्धको खेलमा गोल तपाईंलेनै हान्दै आउनु भएको छ भोक हडतालको माध्यमबाट । सरकार भने चिकेनको साप्रा चपाउने र बियरले कुल्ला गर्ने तपाईं भने गान्धी नीति अप्नानाउने कस्तो अचम्म है !!
तपाईंको पेशा बिमारी सग सम्बन्धित हुदाहुदै पनि आजसम्म तपाईंलेनै नदेखेको एउटा पाटाे- बिमारी बाट सरकारले उठाइरहेको अतिरिक्त शुल्क Vat सम्बन्धमा किन तपाईंको ध्यानाकर्षण भएन ? रगत दिसापिसाब खकार देखि भ्यान्टिलेटरमा बस्दा सम्मको Vat असक्त बिमारी सग लिने कि मौकामा चौका हान्ने अस्पताल सग लिने ? यो कुरो चै तपाईंले आजसम्म पनि देख्नु भएको रहेनछ डाक्टर साहेब !
अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त जानेको मान्छेले भन्छ सरकारले भ्याट खर्च गर्ने सग जोडेर लिने होइन आम्दानी गर्ने सग लिने हो । तर यहाँ ठिक बिपरित भैरहेको छ । यदि कमाउने सग कर लिनु भने पनी आखिर ब्यापारीले मुल्य समायोजन गरेर उपभोक्ता सग नै करको अतिरिक्त पैसा उठाइरहेको हुन्छ ।
एउटा रोगीको रोग सग सरकार किन १३ प्रतिशत भ्याट असुल्छ ? के यहाँ मृत्यु पनि फ्री छैन? बचाउन त सकेनौ सकेनौ कमसेकम मर्दा त उस्का परिवारलाई ऋणमा नडुबाइदेउ सरकार ! बस मेरो माग यति हो । आउ गोबिन्द केसी ! हामी तिम्रो लडाइँमा साथ छौ अब तिमीले यो बारेमा चर्को आवाज उठाउनु पर्छ ।